केन्द्रीय सुरक्षा समितिले के निर्णय गऱ्यो ? « रिपोर्टर्स नेपाल
काठमाडौं, १० साउन । गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको अध्यक्षतामा आइतबार सिंहदरबारमा बसेको केन्द्रिय सुरक्षा समितिको बैठकले ४ बुँदे निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले कोभिड तेस्रो लहर बढ्ने सम्भावना उच्च र यसलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै जनताको स्वास्थ सम्बन्धि स्वास्थ सामग्रीलाई सहज व्यवस्थापन तथा कालोबजारीलाई नियत्रण गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । बैठकले बाडीपहिरो र डुबानमा परेका समुदायहरुलाई राहत र उद्दार र नियत्रण स्वास्थ तथा खाद्य सामग्री सहजी कारण गर्न हेली व्याथापन गर्नेसमेत निर्णय गरेको हो । पछिल्लो समय साइबर क्राइमका घटना बढिरहेकाले त्यसलाई मध्यनजर गर्दै नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्नेसमेत केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकको निर्णय छ । समितिले गरेको निर्णयमा साइबर क्राइम बढेको र व्यवस्थापन एवं नियन्त्रण गर्नेु उल्लेख छ ।
उक्त बैठकमा गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने ,नेपाली सेनाका रथी प्रभुराम शर्मा ,प्रहरी महानिरीक्षक शैलेस थापा क्षेत्री ,सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल ,राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभाग प्रमुख गणेश प्रसाद अधिकारी,रक्षा मन्त्रालयका कामु सचिव आलोकचन्द्र श्रेष्ठ ,गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेललगायत उपस्थित रहेको थियो ।
माधव नेपालको पार्टी पदाधिकारी पार्टी भएको ओलीको टिप्पणी (लाईभ-भिडिओसहित)
काठमाडौं, ७ असोज । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीति भनेको त समाजलाई
प्रचण्डलाई घनश्याम भुषालको जवाफ : हाम्रो पार्टी हामीले नै बनाउँछौं
काठमाडौं, ७ असोज । नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव घनश्याम भुसालले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष
शशांकले भने–‘म सभापतिमा उम्मेद्धवारी दिन्छु, ब्याक हुने कुरै छैन’
काठमाडौं, ७ असोज । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले १४औं महाधिवेशनमा आफूले सभापतिमा उम्मेद्धवारी
प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक विधेयक-२०७८ पारित
काठमाडौं, ७ असोज । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को अवरोधका बीच प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक विधेयक
प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु (लाईभ-भिडिओसहित)
काठमाडौं, ७ असोज । प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएको छ । बैठक सुरु हुनासाथ प्रमुख प्रतिपक्षी